Allsomali24.com | Archive | SOMALI NEWS
Waxaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ka socota munaasabada calleemo saarka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynayaal, Diplomaasiyiin, Wakiilo iyo Xubno kale oo heer caalami ah ayaa ka qeyb galaya xaflada, waxaana madaxda joogta ka mid ah; Madaxweynaha Jabuuti, ismaaciil Cumar Geelle. Madaxweynaha dowladda Kenya, Uhuru Kenyatta. Ra’iisal wasaaraha dalka Itoobiya, Hailemariam Desalegn. Madaxweyne […]
Feb 22, 2017No CommentRead More
In kabadan 60 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabelle ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabellaha Dhexe, iyaga oo ka hor yimaadeen magacaabista golaha wasiirada ee maamulkaasi. Xildhibaannada Waxay sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin magacaabista wasiiradan oo ay sheegeen in aan loo waafajin hannaanka awood qeybsiga. Xildhibaan Cabadiraxmaan […]
Ururka Al-Shabaab ayaa la wareegay gacan ku heynta deegaanka Camaara oo ka tirsan Galmuduh oo dhawaan ay tageen ciidamo ka tirsan maamulka Galmudud, militariga Soomaaliya iyo kuwo Puntland. Wararka ka imaanaya deegaankaasi ayaa sheegaya in maleeshiyada Shabaab markii ay la wareegeen Camaara ay dab qabadsiiyeen goobo ganacsiga, sidoo kale horey u ka xeysteen 20 qof […]
Madaxweynaha Ahlu Sunna ee gobollada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir ayaa goor dhaw oo maanta ah ka degay, waxaana lagu wadaa in uu ka qeybgalo caleemo saarka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Safarka Sheekh Shaakir ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee uu ku tago magaalada Muqdisho tan iyo markii loo caleemo saaray in uu noqdo madaxweynaha […]
Feb 21, 2017No CommentRead More
Madaxweynaha dowlad gobolleedka Jubbaland Axmed Max’ed Islaam [Axmed Madoobe] ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayeey labada mas’uul uga wada hadlleen arimo la xiriira gaar ahaan guusha uu Farmaajo ka gaaray doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho. Axmed Mdaoobe ayaa taageero balaaran u […]
Madaxweynaha Hirshabeelle Cali C/laahi Cosoble ayaa magacaabay Golaha Wasiirada Maamulka Hirshabeelle oo in mudo ah laga sugayay, maadaama waqti dheer loo siiyay in uu ku soo magacaabo. Madaxweynaha ayaa soo magacaabay 23 Wasiir, 23 Wasiir ku xigeen iyo 6 Wasiiru Dowle, sida ku cad warqad ka soo baxday xafiiskiisa. Gollaha wasirada lagu dhawaaqay ayaa intooda […]
The International Monetary Fund is backing Somalia’s plans to replace tattered currency notes that were printed before the Horn of Africa nation plunged into civil war almost three decades ago. The new Somali shilling notes may come into circulation this year, alongside the dollar that’s been the main means of payment, and will replace fake […]
IMF sanduuqa lacagta adduunka ayaa Soomaaliya ka taageeraysa lacag cusub oo lasoo daabacay inta lagu gudajiro sanadkan 2017. Samba Thiam oo ah madaxa IMF ee gobolka, ayaa sheegay in shilin Soomaaliga cusub la soo daabici doono isla sanadkan, iyadoo ay jirto in doolarka uu yahay lacagta salka u ah waxbixinta, lacagtan cusub ayaa lagu bedeli […]
Wakiilka xog-hayaha guud ee QM Machael Keating ayaa cambaareeyay weerarkii ay dadka badan ku dhinteen ee maalintii shalay ka dhacay suuq mashquul badan oo ku yaallay xaafadda Kaawo –Goodey ee degmada Wadajir. “Waxaan cambaareyneynaa weerarkii argagixisada ee Muqdisho ka dhacay ee lala eegtay dadka rayidka ah” ayuu yiri wakiilka QM ee Soomaaliya. Maalintii shalay ayeey […]
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa caawa ku booqday Isbitaal Madiina dhaawacyadii ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay Suuqa Kaawo-Godey ee degmada Wadajir, halkaasoo lagu weeraray gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay. Madaxweyne Farmaajo oo ay wehliyeen Taliyeyaasha Nabadsugida, Booliska iyo Asluubta ayaa xog wareystay qaar ka mid ah dhaawacyada, isagoo […]
Feb 19, 2017No CommentRead More
Page 1 of 791123Next ›Last »	Advertisements